ह्याङ आउट - यो ... अर्थ, पर्यायवाची
"Haza", "blathata", "गुफा" - यी सबै शब्दहरू संज्ञा "ह्याङ आउट" मा पर्याय हुन्। को व्याख्यात्मक शब्दकोश मा Vladimira Dalya शब्दहरू हुन सक्छ के को एक संज्ञा मात्र अनुमान, छ। यो एक प्रश्न चिन्ह थपेर "आफूलाई अड्डा को लागि" क्रिया को आधार र "pritnutsya" को रूपमा संकेत गर्छ।
कसरी stash भनिन्छ?
भाषाविद् भन्छन्: सुरुमा stash "गुफा" भनिन्थ्यो। सायद, शब्द को परिभाषा - "अपराध र debauchery को ठाउँमा" वा "मान्छे विभिन्न बेईमान उद्देश्यमा भेला ठाउँमा" - "। चोर को गुफा" कारण सुसमाचारको वाक्यांश मा प्रयोगहरू गर्न
Shebang - यो शब्द को अर्थ के हो ...
आज, यो शब्द जहाँ मान्छे आपराधिक लक्ष्य लिएको छ संग नियमित भेट्ने ठाउँ हो। सबैभन्दा अक्सर ओडार - आपराधिक गिरोह को सदस्य स्वामित्वको एक पारंपरिक अपार्टमेन्ट। अक्सर, यो क्षमता प्रयोग र स्थानहरू त्यागेर छन् - निर्माण साइटहरू, भंडारगृहों। त्यसपछि लागूपदार्थ र वेश्यावृत्ति मा समावेश वितरण त्यहाँ आपराधिक गिरोह को बैठक नेताहरूले छन्,: ओडार धेरै कार्यहरु। अक्सर Hangout - आश्रय र लुकाउने ठाउँ रूपमा गर्दछ ठाउँ छ।
brothels को सामान्य प्रकार
त्यहाँ ठाउँहरू विभिन्न प्रकारका छन्। नाम Hangout निमित्त जसको लागि उद्देश्य मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, जहाँ मान्छे कुनै पनि psychoactive तत्त्वहरु को प्रयोग को प्रयोजन को लागि भेला ठाउँ, ग्यालरीमा शूटिंग भनिन्छ। तदनुसार, alkopritonom भनिन्छ स्थिति intoxicating पेय पिउने लागि अभिप्रेरित। जुवा ओडार - एक कोठा, जुवा को कहाँ मान्नेहरूले। जब अपराधीहरूलाई, आर्थिक सुरक्षित गएर र blathatoy भनिन्छ आपराधिक संसारमा गम्भीर जडानहरू, ह्याङ आउट छ छन् जहाँ एक घर वा अपार्टमेन्ट मालिक। चोर सामान्यतः भनिन्छ "चोर raspberries।" जहाँ वेश्यावृत्ति मा लगे एक वेश्यालय, बस दुई शीर्षक। यो एक "वेश्यालय" र "वेश्यालय" छ।
संगठन र एक वेश्यालय राखन के हो?
रूसी संघ, एक वेश्यालय को संगठनको आपराधिक कोड अन्तर्गत - यसको सिर्जना उद्देश्य कार्यहरू छन्। यी खोज र परिसर राखने, यो उपकरण आवश्यक सबै समावेश गर्नुहोस्। साथै, एक वेश्यालय को संगठन यसलाई प्रयोग गर्न इच्छुक छन् जो मानिसहरू को संलग्नता समावेश छ। अपराध hotbed सामग्रीहरू गर्न सुरक्षा र भौतिक समर्थन गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। मर्मत र सफाई पनि सामग्री समावेश छन्। खैर, यहाँ सामान्यतया समावेश छन् र ग्राहक सेवा।
मिति, यो संगठन र दबाइ घरहरू वा वेश्यावृत्ति लागि परिसर नियमित प्रबन्ध सामग्री लागि आपराधिक दायित्व लागि प्रदान गर्दछ।
"Stash" को एक वैकल्पिक अर्थ
यो मात्र होइन ह्याङ आउट ह्याङ आउट आपराधिक तत्व भनिन्छ कि टिप्पण लायक छ। यो शब्द अर्को अर्थ छ। ह्याङ आउट - एक ठाउँ जहाँ जनावर, चरा वा माछा धेरै।
"भन्नुहोस्" वा "बताउन": किनभने सही लेख्न सबै एउटै?
के अभिव्यक्ति "समाप्त पूरा बनाउन" गर्छ?
शब्द को आधारभूत अर्थ: तामचीनी के हो
अंग्रेजी मा पढ्न कसरी सिक्न
शुद्धता - यो ... अर्थ र उपयोग उदाहरणहरु
को twists के हो र प्राचीन र आधुनिक नाटक मा उत्तेजित गर्दछ?
ओरिगेमी कागज: शुरुआती लागि योजनाहरु। ओरिगेमी: रंग योजना। सिकारुहरूको लागि ओरिगेमी: फूल
150 क्षेत्र - यो शहर छ?
विनाशकारी र रचनात्मक संघर्ष
सोभियत slogans र प्रचार मूल्य
विद्युत सर्किट मा schottky डायोड
प्रकार र लोक गीतहरू विधाहरू
मोटर वाहन बेलारूसी संख्या रूस मा मान्य छन् हुनुहुन्छ? कानुनी सल्लाह
एकल-चरण पानी को लागि पंप अपकेंद्र: योजना। Cantilever एकल-चरण अपकेंद्र पंप। ठाडो एकल-चरण अपकेंद्र पंप
एक उपहार रूपमा आफ्नो हातमा आफैलाई चकलेट को एक अद्वितीय bouquets के
Cultivators: समीक्षा र निर्माताहरु
Sausages Creamy। रचना र क्यालोरी सामग्री
सलाद "मिमोसा star name ट्यूना" व्यञ्जनहरु